Unboxing voalohany an'ny iPhone 13 Pro miloko volamena | Vaovao IPhone
Misy unboxing voalohany amin'ny iPhone 13 amin'ny volamena hita ao amin'ny tambajotra izay mety tsy tokony navoaka nandritra ny andro vitsivitsy, saingy mbola tsy nisy. Ity dia iray amin'ireo horonan-tsary azo antoka fa mahazo fitsidihana an-tapitrisany fa tsy noho ny marina noho ny kalitaon'ny fanovana. Ity horonantsary ity no voalohany navoaka tamin'ny Internet sy izany mampiseho ny tsy fandefasana boaty ny iPhone 13 Pro Max vaovao.
Azontsika antoka fa ny iPhone 13 vaovao dia hanana horonantsary tsara amin'ny Internet fa tsy tena vita amin'ny fakantsary mahery. Ireo karazana horonan-tsary ireo dia tiana foana ary raha ianao no voalohany mizara izany amin'ny tambajotra sosialy YouTube azonao antoka fa mahazo fitsidihana vitsivitsy ianao.
Ny fantsona YouTube SalimBaba Teknika, niandraikitra ny famoahana ity horonantsary ity ary lozika fa tsy misy ifandraisany amin'ireo horonantsary tsy misy boaty an'i iJustine na i Marques taloha tsara. Na izany na tsy izany dia, jereo ny atin'ny boaty modely iPhone 13 vaovao, amin'ity tranga ity ny maodely Pro Max amin'ny volamena. Ity ny horonantsary:
Mampiseho mazava tsara ny zavatra ampiana ao anaty boaty amin'ilay maodely vaovao iPhone 13 Pro Max ilay horonan-tsary. Ny tariby manafatra, ny torolàlana kely ary dia izay. Ny tsy fandefasana boaty an'ireo iPhone 13 vaovao ireo dia mampatsiahy antsika ny maodely iPhone teo aloha, ilay 12. Tsy misy karazana charger nampiana ao amin'ilay boaty. Amin'ity herinandro ity isika dia hanomboka hahita horonantsary bebe kokoa mitovy amin'ity, na ahoana na ahoana dia manantena izahay fa miaraka amina fanontana somary miasa kokoa na dia tsy ilaina aza izany satria ny iPhone 13 dia tsy manampy zava-baovao mihoatra ny hitantsika tamin'ny maodely teo aloha.
Ho fanamarihana azon'izy ireo naseho raha toa ka miloko volamena ny stiker Apple? 😄
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Unboxing voalohany an'ny iPhone 13 Pro amin'ny volamena